Iphone-ka 2020-ka wuxuu ku dari lahaa kamarad gadaal 3D ah oo leh dhaqdhaqaaqa lagu ogaado | Wararka IPhone
Xanta iPhone-ka ee sanadkan ayaa diirada saaraya meesha ay ku yaalaan kaamirooyinka ku yaala dhabarka qalabka iyo wax kale oo yar. Xaaladdan oo kale xanta loogu talagalay iPhone 2020Si kale haddii loo dhigo, sanadka soo socda shirkaddu waxay ku dari kartaa dareemayaasha 'ToF 3D' kamaradda weyn si loo hagaajiyo tayada sawirrada la qabtay iyo sidoo kale in loogu adeegsado howlaha dhabta ah ee la kordhiyay.
Xaaladdan oo kale, warku wuxuu ka yimid gacanta mid ka mid ah falanqeeyayaasha ugu fiican ee aan ku hayno Apple, oo ah caan caan ah Ming-Chi Kuo. Kuo, wuxuu ka digayaa in iPhones-kan cusubi ay horumar weyn ku yeelan doonaan kaamirooyinka gadaal iyadoo lagu darayo ikhtiyaarka lagu ogaanayo dhaqdhaqaaqa iyo sidoo kale wuxuu sharxayaa tayada sawirka ayaa ka faa'iideysan doona leh nuucyo dareemayaal ah.
Aqoonsiga Face-ka ayaa ku sii socon doona iPhone-kiisa sanadka soo socda
Waa run inay jirto waddo dheer oo loo maro ka hor intaan xilligan la gaadhin, laakiin shirkaduhu dhaqdhaqaaqyada ma sameeyaan maalin ilaa maalinta xigta, markaa waa suurtagal in faahfaahinta qaar ee aaladaha ama si fudud fikradaha qaarkood ay uga baxsadaan. Xaqiiqdu waxay tahay inay jirto xanta dhawaanahan ka hadlaysa imaatinka dareeraha faraha ee shaashadda hoosteeda, laakiin Kuo wuxuu sharxayaa in tani aysan noqon doonin oo Apple ay ku dhejin doonto shidma hore oo leh aqoonsi Face ID ah oo caan ah. Waan arki doonaa waxa ugu dambeyn ku dhaca kiiskan.
Kuo wararka xanta ah iyo wararka sida iska cad waxay ku darayaan 5G sidoo kale, sidaa darteed waxaan eegeynaa isbadal xoog leh oo ku saabsan jiilka soo socda ee iPhones. Haatan waxaan sugeynaa Apple inay soo bandhigto iPhone-kan cusub ee 2019 inta lagu jiro bisha Sebtember ka dibna waan arki doonaa waxa ku dhacaya midka soo socda.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » iPhone » 2020 iPhone waxay ku dari kartaa kamarad 3D gadaal ah oo leh dhaqdhaqaaq lagu ogaanayo
Sida looga hor istaago Apple inay dhagaysato dhamaan wada sheekaysigeena